Amandla-Supply Izici - China BST (HongKong) Industrial
Kunezinhlobo eziningana izici amandla supply ezithinta ukusebenza yabo:
Drift: I ezihlukile dc okukhipha voltage njengoba umsebenzi isikhathi kumugqa njalo voltage, umthwalo, futhi lokushisa kuma.
Ukusabela Dynamic: A ugesi bangaqashwa e uhlelo lapho kuyimfuneko ukunikeza okusheshayo Ukusabela ashukumisayo yoshintsho amandla umthwalo. Lokho kungaba icala umthwalo ephezulu ijubane microprocessors ngamandla-zokuphatha imisebenzi. Kulokhu, microprocessor kungenzeka isimo eceleni futhi phezu komyalo kumelwe uqale phezulu noma cisha ngokushesha, okuyinto umnika ngenkani imisinga ashukumisayo okusezingeni eliphezulu fast kummango amazinga phezu kwamandla. Ukuze ihlanganise sekhompiyutha, okukhipha voltage supply kufanele ummango phezulu noma phansi ngesikhathi esithile isikhawu, kodwa ngaphandle overshoot ngokweqile.
Ukuphumelela: Inani labantu okufanele lifinyelelwe okukhipha i-okokufaka amandla (in amaphesenti), kulinganiswa ngesikhathi esinikeziwe umthwalo lamanje nge izimo umugqa okuzisholo (Pout / PIN).
Isikhathi Holdup: Isikhathi ngesikhathi lapho okukhipha voltage amandla supply usalokhu ngaphakathi sebhithi kulandela ukulahlekelwa amandla okokufaka.
Inrush wamanje: zamanje okokufaka Peak leso edonswa kwamandla ngesikhathi ijika-ku.
Amazinga International: Cacisa izidingo zokuphepha amandla supply futhi ovumelekile EMI (ukuphazamiseka kagesi) amazinga.
Ukuba Wedwa: ngokwahlukana kagesi phakathi input bese okukhipha ka kwamandla ulinganiswa volts. A non-angawodwa has a indlela dc phakathi input bese okukhipha ukunikezela, kuyilapho qekelele ugesi iqasha transformer ukuqeda indlela dc phakathi input bese okukhipha.
Isiqondiso Line: Ushintsho ukubaluleka dc okukhipha voltage okubangelwa ushintsho voltage ac okokufaka, ebekiwe njengoba ushintsho ± mV noma ±%.
Layisha isiqondiso: Ushintsho ukubaluleka dc okukhipha voltage okubangelwa ushintsho umthwalo kusukela levulekile wesifunda esiphezulu esinesilinganiso okukhipha zamanje, ebekiwe njengoba ushintsho ± mV noma ±%.
Umsindo lokukhipha: Lokhu kungavuka amandla supply ngesimo imisindo emifushane okusezingeni eliphezulu imvamisa amandla. Umsindo kubangelwa ukushaja nokudisishaja ka capacitances yisinanakazana ngaphakathi kwamandla ngesikhathi yokusebenza umjikelezo waso. Amplitude Its variable futhi bathembele impedance umthwalo, ukuhlunga zangaphandle, futhi kangakanani nesilinganiso.
Lokukhipha voltage ngombala: Most power supplies have the ability to “trim” the output voltage, whose adjustment range does not need to be large, usually about ±10%. One common usage is to compensate for the dc distribution voltage drop within the system. Trimming can either be upward or downward from the nominal setting using an external resistor or potentiometer.
ukuphambuka gqwa okungahleliwe (PARD): okungafuneki gqwa (yezwakala) noma aperiodic (umsindo) ukuphambuka we amandla supply okukhipha voltage kusukela inani layo bokuzisholo. PARD lubonakaliswa mV isiqongo-to-isiqongo noma RMS, ngesikhathi i-bandwidth esithile.
Inani Eliphakeme wamanje: Umkhawulo wamanje ukuthi kwamandla anganikeza isikhashana.
Amandla Peak: I ngokuphelele esiphezulu amandla okukhipha ukuthi kwamandla angakhiqiza ngaphandle umonakalo. Kuyinto ngokuvamile kahle ngaphesheya okuqhubekayo okunokwethenjelwa amandla okukhipha khono futhi kumele sisetshenziswe kuphela njalo.
Amandla-supply kulandzelanisa: Ngokulandelana baphendukela-futhi off of segezi kungadingwa kumasistimu amaningi yokusebenza voltages. Okungukuthi, voltages kufanele usetshenziswe thize, ngenye indlela uhlelo kungalimala. Ngokwesibonelo, ngemva kokufaka voltage kuqala futhi ifinyelela value othize, zinamandla yesibili kungenziwa ramped up, nokunye. Ukulandelanisa isebenza in reverse uma amandla isusiwe, nakuba ijubane ngokuvamile kakhulu yenkinga njengoba ithuba-ku.
Remote kokuvula / ukuvala: Lokhu kunamaqiniso wokushintsha ujike segezi futhi off. Amandla-supply idatha-ishidi Ukucaciswa ngokuvamile ngokuningiliziwe nemingcele dc akude on / ukuvala, sibhale ngaphakathi nangaphandle kwe amazinga logic edingekayo.
Umqondo Kude: A ejwayelekile ugesi uqaphe okhiqizwayo voltage feeds ingxenye emuva supply ukunikeza voltage isiqondiso. Ngale ndlela, uma okukhipha ivame ukuba avuke noma awe, lo impendulo ulawula okukhipha voltage supply sika. Nokho, ukugcina i-okukhipha njalo umthwalo, amandla supply empeleni ukuqapha voltage at umthwalo. Kodwa, ukuxhumana kusukela ekukhishweni amandla supply ukuze komthwalo wayo ube ukumelana naso futhi kwenze zamanje eligeleza kuwo olukhiqiza iconsi voltage ukuthi kudala umehluko voltage phakathi okukhipha supply futhi umthwalo langempela. Ngokulawulwa elilungile, voltage fed emuva amandla supply kufanele kube langempela umthwalo voltage. Ezimbili (plus futhi lokususa) akude umuzwa uxhumano supply sika ukuqapha langempela umthwalo voltage, ingxenye elivele ke wasuthisa emuva supply nge kancane kakhulu voltage iconsi ngoba wamanje ngokusebenzisa ezimbili kude umqondo uxhumano sincane kakhulu. Ngenxa yalokho, lo voltage isetshenziswa umthwalo kulawulwa.
Ripple: ekulungiseni kanye gqwa okukhipha Imiphumela a usuke ugesi e-ikhomponethi ac (yezwakala) ukuthi ekade ikhwela kulo nelifakwe dc yayo okukhiphayo. Imvamisa Ripple ezinye eziningi ebalulekile usuke imvamisa Converter sika, okuyinto incike yomphindwa Converter. Ripple kuqhathaniswa awanandaba umthwalo zamanje, kodwa kungenziwa kwehle ngo zangaphandle capacitor zokuhlunga.
Ukulandelela: Uma usebenzisa amaningi okukhipha segezi lapho eyodwa noma ngaphezulu okukhiphayo ukulandela omunye nezinguquko emgqeni, umthwalo, futhi izinga lokushisa, ukuze ngamunye igcina okufanayo ezilinganiselwe okukhipha voltage, ngaphakathi ecacisiwe kokulandela ukubekezelelana, ngenhlonipho kunani ezivamile.